Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1400
Jery taratra… herinandro : fifandroritana… tsy ahitana ny marina
Par Taratra sur 12/03/2016 Divers, NS Malagasy
Lasa fifamaliana ny “Raharaha Anjozorobe“: ady amin’ny fifandraisana, amin’ny haino aman-jery… Nilaza ny filohan’ny Repoblika ny amin’ny tokony hitondra porofo, raha tany Anjozorobe ny zanany. Nanamafy ny zanak’Androy fa manana porofo ny amin’izany, ary tsy hamela ny raharaha ho vitavita ho azy. Andrasana ny vokatry ny fanadihadiana lalina, fa tsy ahitana ny marina ny fifamaliana […]
Par Taratra sur 12/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny mpitondra no mitondra, ny vahoaka: avy amin’ny vahoaka ny fahefam-pitondrana, ampindraminy araka ny fe-potoana voafaritry ny lalàna. Araka izay nifanarahana tamin’ny fifidianana io: hanatanteraka ny fanamby sy ny fampanantenana tamin’ny fampielezan-kevitra nahavoafidy azy ny mpitondra. Tokony hiantehitra amin’izay fahefana avy amin’ny vahoaka izay ny mpitondra. Na amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana ankehitriny io, na ny mbola ho […]
Noho ny setrasetra sy fifanenjehan’ny taksiborosy… : olona roa no indray namoy ny ainy tetsy Sabotsy Namehana
Par Taratra sur 12/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Raim-pianakaviana roa no indray namoy ny ainy, noho ny lozam-pifamoivoizana nitranga tetsy Sabotsy Namehana, omaly tolakandro. Noho ny setrasetra vokatry ny fifanenjehan’ireto taksiborosy roa miasa amin’ny zotra Antananarivo-Anjozorobe ny nahatonga ny loza. Lalana efa tery, ireto taksiborosy roa mampitohy an’Anjozorobe sy Antananarivo nifanenjika. Nifatratra tamin’ny toeram-pivarotana iray eny an-toerana ilay fiara iray, ary mbola nandona […]
Kitra – Ligue des champions d’Europe : nofaizin’ny Paris St Germain ny Chelsea
Par Taratra sur 11/03/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nomen’ny Frantsay lesona ny Anglisy, nandritra ny lalao ampahavalon-dalana miverina, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, eo amin’ny baolina kitra. Tsy mbola afa-bela tamin’ny Paris St Germain mantsy ny Chelsea fa resiny teo amin’ny kianja filalaovany tamin’ny isa 2 noho 1, toy ny tamin’ny lalao mandroso, tany Frantsa ihany. Tafita eo […]
Kitra Afrikanina : nahazo lelavola 5 tapitrisa Ar ny Cnaps Sport
Nanainga omaly, tamin’ny 4 ora hariva, hihazo an’i Casablanca, Maraoka ny Cnaps Sport. Hiatrika ny lalao ampahavalon-dalana mandroso, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions 2016”, taranja baolina kitra. Nialoha ny niaingan’ny Cnaps Sport, handeha ho any Maraoka, hiatrika ny lalao amin’ny Wydad de Casablanca, eo amin’ny fiadiana ny “Ligue des […]
Nampitovy ny fomba fijery ny mpikambana Hina
Par Taratra sur 11/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nivory nandritra ny roa andro teto Antananarivo ny mpikambana ao anatin’ny Vovonan’ny fiarahamonim-pirenena miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo (Hina). 200 ny fikambanana malagasy sy vahiny mpikambana amin’izao fotoana izao miasa amin’ny faritra sivy ka nahatonga solontena avokoa. Tao anatin’ny roa andro, nisy fampitoviana ny fomba fijery mikasika ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, satria marolafy ny sehatra […]
Basikety : hampiofana eo amin’ny Young Coach Razafiarivony Angelo
Par Taratra sur 11/03/2016 Divers, NS Malagasy
Raikitra. Hahazo fiofanana mpanazatra Young Coach, niveau 1, eo amin’ny taranja basikety, avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena aty Afrika na Fiba Afrique, i Madagasikara. Raha ny fampitam-baovao, fiofanana avy amin’ny Fiba Afrique hiarahany amin’ny federasiona malagasy (FMBB) izany. Araka izany, voalaza fa ilay manampahaizan’ny Fiba Afrique, teratany malagasy, Razafiarivony Angelo, no hitarika ny fampianarana manomboka ny […]
Mpanivana, mpanangona, mpivarotra volamena : resen-dahatra ny hidiran’izy ireo ao anatin’ny fanarahan-dalàna
Par Taratra sur 11/03/2016 Economie, NS Malagasy
Najoro, ny volana avrily 2015, ny Ivontoeram-pirenena miandraikitra ny volamena na Anor (Agence nationale de l’or) solon’ny Comptoir de l’or, mandrafitra ny lalàna hidiran’ireo sokajin’olona samihafa ao anatin’ny ara-dalàna amin’io sehatra iray io. Nitondra fanazavana momba izany ny talen’ny Anor, Raoilison Guy, sy ireo mpiara-miasa aminy, omaly teny Ampiandrianomby. Nitondrana fanazavana ny amin’ny tokony hidiran’ireo […]
Taolagnaro 14-16 marsa 2016 : fihaonamben’ireo mpandraharaha malagasy sy vahiny
Hotanterahina any Taolagnaro, ny 14 hatramin’ny 16 marsa ho avy izao, ny fivoriambe iombonan’ireo Antenimieran’ny varotra sy ny indostria miisa 24, eto amin’ny Nosy. Io ny fivoriana iraisana voalohany, hifanakalozan-kevitra hahafantarana ny vokatra any amin’ny faritra tsirairay avy, hisian’ny fifanakalozana ara-barotra. Nosoritan’ny lehiben’ny Federasion’ny Antenimieran’ny varotra eto Madagasikara, Chabani, fa betsaka ny vokatra eto amintsika […]
Antanimena-Alaotra : nahatsangana CEG ny vehivavy
Dimy taona lasa izay, niezaka nanangana trano hatao CEG ny mponina tao amin ny fokontany Antanimena, kaominin’i Manakambahiny-Andrefana, distrikan’Ambatondrazaka. Voatsangana ny rindrina, voatafo ny ilany ary nihantona teo ny asa fa lany vola ny fokonolona. Tamin’ny alalan’ny fifarimbonan’ireo vehivavy tao an-tanàna anefa no nahafahana nanohy ny asa. Nivondrona tao anatin’ny fikambanana Manolontsoa izay tarihin-dRamatoa Rasoanandrasana Elisabeth […]
Hametraka tahirin-kevitra, amin’ity volana marsa ity, ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria Toliara (CCI Toliara) mba hahalalan’ny mpandraharaha rehetra mahakasika ny CCI Toliara ny fifanarahana eo amin’ny Vovonan’ny tranoben’ny varotra eto Madagasikara sy ny banky BNI. Nampahafantatra izany ny filohan’ny CCI Toliara, Razafitombo Elijaona. Voalohany amin’izany ny fanisana ny mpandraharaha rehetra ao anatin’ny faritra. Faharoa, […]
American Center, Tanjombato : «Vehivavy 10, lohahevitra 10, fanamby 10 »
Nisokatra ny 8 marsa teo ilay fampirantiana miavaka momba ny vehivavy: «Vehivavy 10, lohahevitra 10, fanamby 10 » no lohahevitra amin’izany. Natao hanamarihana ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy karakarain’ny American Center sy ny Fireflies ary ny masoivoho amerikanina ny hetsika. Natao hampisongadina ny zava-bitan’ireo vehivavy malagasy miasa eo amin’ny sehatra samihafa eto amin’ny firenena […]
« Classe patrimoine » : mpianatra sy skoto 813 efa nanao fitsidihana
30.000 no tanjona mandritra ity taona 2016 ity, ka 813 no efa tratra tao anatin’izay roa volana izay. Tsy inona akory izany fa ny isan’ny mpianatra sy ny tanora avy amin’ny fikambanana samihafa, toy ny skoto, nandray anjara tamin’ny « classe patrimoine » na ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara eto Antananarivo, arahina fampahafantarana ny tantara sy ny […]
Par Taratra sur 11/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Rabejaona Nosy, anarana nipoitra sy nanomboka fantatra taorian’ny nahamay ny Rovan’Antananarivo. Fotoana nitsanganan’ny fikambanana Mamelomaso izay tarihiny rahateo. Nalaza tamin’ity hernandro ity ny fanamarihana ny Taom-baovao malagasy. Fankalazana izay nifandroritana ihany ny fotoana tokony hanatanterahana azy. Tranga miseho isan-taona. Milaza ny heviny ity mpahay tantara iray ity Gazety Taratra (*) : Amin’izao fotoana izao ny Taom-baovao […]
Par Taratra sur 11/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Tsiakoraka etsy amin’ny Piment Café Niaraha-nahalala ny fahabangana teo amin’ny tarika Tsiakoraka, tamin’ny fahalasanan’i Doda tamin’iny taona iny. Fantatra fa haompana amin’ny fahatsiarovana azy sy i Setra, samy mpikambana mpanorina, ny faha-30 taon’ny tarika Tsiakoraka amin’ity taona ity. Ho fisantarana izany, hisy ny « cabaret » izay hotontosaina anio alina, etsy amin’ny Piment Café Behoririka. Holalovana an-kira […]
Hetsiky ny Taom-baovao malagasy : hamarana ny lanonana i Nantenaina
Tao anatin’ny andro maromaro nanamarihana ny Taom-baovao malagasy, samy nanatanteraka ireo hetsika nanandrify azy ny fikambanana samihafa. Hanakatonana izany ny lanonana hotanterahina, eny amin’ny Espace Mercy By-Pass, Ambohimanambola, ny 12 marsa izao manomboka amin’ny 10 ora maraina. Anisan’ny hanafana ity hetsika ity i Nantenaina, mpanakanto fantatra amin’ny tononkira milaza ny zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina. Mpanakanto […]
PM Ravelonarivo : « Aoka hohajaina ny lalàna… »
Par Taratra sur 11/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hentitra ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean manoloana ireo mety ho fihoaram-pefy ataon’ny vahiny eto amintsika, indrindra fa ireo teratany sinoa. « Ilaina ny fiaraha-miasa, saingy tany tan-dalàna isika ka na avy aiza na iza, tokony hanaja ny lalàna velona. Tokony samy hanara-dalàna na ny vahiny na ny tompon-tanindrazana », hoy izy, teny Mahazoarivo nanoloana ny mpanao gazety, […]
Paris – Unesco : hihira ny frankofonia i Lalatiana sy Nicolas Fraissinet
Frankofonia, ambetin-dresaka sy malaza amin’ny fampahalalam-baovao hatrany ivelany any. Herinandron’ny frankofonia mantsy ny 12 hatramin’ny 20 marsa izao. Fa anisan’ny hetsika miavaka indrindra ny karakarain’ny foiben’ny Unesco na ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fanabeazana, ny siansa ary ny kolontsaina, any Paris. Mikarakara seho mitondra ny lohateny hoe « La francophonie en chantant » izy ireo, ny […]
Haody : azo isintonan-javatra ny tahaka ireny
Nahomby sa tsy nahomby ? Nahasarika ny Malagasy sa tsia ?… Samy manana ny nahitany azy ny fankalazana ny Taom-baovao malagasy. Ny niraisana, samy nanao izay ho afany ny mpikarakara. Endrika nahatsara zavatra fa mety hahalasa eritreritra ihany manoloana ny « firaisankina no hery », « ny mitabe tsy lanin’ny mamba »… Mbola mila voizina mafy ny kolontsaina malagasy tahaka itony […]
Mbola mahazo vahana ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa… Any Maroantsetra, hisorohana izany ny fananganana ny komitin’ny olon-kendry. Natsangana ny komitin’ny olon-kendry momba ny raharaha any Maroantsetra, izay nandoroan’ny olona ny biraon’ny fitsarana. Mba tsy hiverenan’ny trangan-javatra toy ireny intsony izany, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fitsarana, Ramanantenasoa Noëline, teny amin’ny fitsarana tampony, Anosy, omaly. “Mpanelanelana […]
Manjakandriana : namboly hazo ny vehivavy
Anisan’ny nanamarika ny Andron’ny 8 marsa koa ny Fikambanan’ny vehivavy mpitarika Manjakandriana (Fivempimanja). Nomarihina amin’ny alalan’ny fambolen-kazo 510 fototra nozaraina amin’ny kaominina Ambanitsena sy Carion ary Sambaina izany. Ahitana oliva, voasary, pibasy ary sapin ireo zana-kazo ireo. « Ilaina ho fanampin-tsakafo sy ho fihariana ho an’ny vehivavy mba hitondra hery sy tanjaka ho an’ny reny sy ny zaza […]
Ambohimanarina : nitsabo maimai-poana ny Affami
Mitohy ny asa sosialy. « Anisan’ny hetsika ataonay ny fijerena sy fanaraha-maso ireo zaza latsaky ny 5 taona, eto amin’ny boriborintany fahenina. Maimai-poana ny fitiliana sy ny fanomezana fanafody ireo zaza ary mahazo sakafo maroloko ara-pahasalamana isaky ny antoandro ireo tsy ampy refy sy lanja », hoy ny filohan’ny fikambanana Affami, ny depiote Raherisoa Vololona Victorine, omaly […]
Efa atsy amin’ny Nosy Maorisy, hatry ny omaly ny filoha Rajaonarimampianina. Hanasonia ny fifanarahana amin’ny hametrahana ny faritra ara-toekarena manokana (Zes) any Ehoala miaraka amin-dry zareo Maorisianina ny tenany. Hanatrika ny faha-48 taona nahazoan’ity Nosy ity ny Fahaleovantenany koa. Hiompana amin’ny varotra, ny jono, ny fizahantany, fahasalamana sy ny fampahalalam-baovao ity fifanarahana ity ary hiteraka […]
Lehilahy iray, 29 taona monina any Ankadikely Ilafy mpangalatra kojakojana fiara no voasambotry ny polisy avy amin’ny Poste de police Ampefiloha ny Alarobia, 9 Marsa tokony ho tamin’ny 10 ora maraina teny Ampefiloha. Maro ny fitarainana voarain’ny polisy mahakasika fahaverezana kojakojana fiara sy moto amin’iny faritra Ampefiloha sy ny manodidina iny. Ny alarobia maraina, nahatsikaritra […]
Andranomanalina : trano roa kilan’ny afo, fianakaviana ampolony traboina
Naharitra ora maromaro vao maty ny afo tamin’ilay haintrano teny Andranomanalina, afakomaly alina. Tsy nisy noraisina intsony ny entana tao an-trano. Sahirana ny mpamonjy voina tamin’ny fifehezana ny afo… Ny akanjo teny an-koditra sisa! Nijoalajoala tsy nisy toy izany ny afo vokatr’ity haintrano teny Andranomanalina ity. Voalazan’ireo niharam-boina fa tamin’ny 10 ora alina no […]
« Précédent 1 … 1 398 1 399 1 400 1 401 1 402 … 1 464 Suivant »